भीम रावल र घनश्याम भुसालले नयाँ पार्टी खोल्दै छन ? योगेश भट्टराईको खुलासा - jagritikhabar.com
भीम रावल र घनश्याम भुसालले नयाँ पार्टी खोल्दै छन ? योगेश भट्टराईको खुलासा
भीम रावल र घनश्याम भुसालले नयाँ पार्टी खोल्दै छन ? योगेश भट्टराईको खुलासा । ओलीले सुरुदेखि नै सर्वसम्मतका नाममा आफु निकट नेताहरुलाई पदाधिकारीमा ल्याएर आफ्नो विरोध गर्नेलाई पन्छाउने रणनीति अख्तियार गरेका थिए । सोही अनुसार उनले पदाधिकारी प्रस्ताव गर्दा आफ्नो विरोध गर्नेलाई पदाधिकारीमा ल्याएनन् ।
आफूनिकट इश्वर पोखरेललाई उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएका छन् भने शंकर पोखरेललाई महासचिव नै बनाए । यस्तै प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालले उनले उपमहासचिव बनाए । तर आफ्नो चर्को विरोध गर्ने रावल र भुसाललाई उनले पदाधिकारीमै समेटेनन् ।
पछिल्लो समय माधव नेपालले पार्टी छाडेर गएपछि आफुनिकट बनेका सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ओलीले उपाध्यक्ष बनाएका छन् । यस्तै योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्टलाई सचिवमै निरन्तरता दिएका छन् ।
नेपालले एमाले फुटाएर नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी खोल्दा पनि एमालेमै बसेका १० भाईका नामले चिनिएका पूर्व माधव नेपाल गुटका नेतालाई फुटाउन ओलीले पदाधिकारीमा उनीहरुको प्रस्तुती हेरेर स्थान दिएका छन् । जसको नेतृत्व रावलले गर्थे । भुसालले भित्रभित्रै उपाध्यक्षको आकांक्षा राखेपनि खुलेर बोलेका छैनन । तर रावलले उम्मेद्वारी नै घोषणा गरिसकेका छन् । सम्भवतः सोमबार उनले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनेछन् ।
रावलको उम्मेद्वारी दर्ता भएपछि एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि मात्रै चुनाव हुने सम्भावना देखिएको छ । बाँकी पदाधिकारीमा असन्तुष्टि जनाएर उम्मेद्वारी दिने हिम्मत एमालेका अरु नेताले देखाएका छैनन ।
ओलीले एकलौटी पदाधिकारीमा आफु निकटका नेताहरुको नाम मात्रै प्रस्ताव गरेपछि अरु नेता कार्यकर्तामा पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ ।